Soosaarayaasha maaskaro | Warshadda Maskaxda ee Shiinaha & Alaab-qeybiyeyaasha
Shaygaani wuxuu adeegsadaa miiraha saddexda lakab, kaas oo si wax ku ool ah u kala saari kara walxaha bakteeriyada ah adigoon neeftaada haynin oo si wax ku ool ah uga hortagi kara qulqulatada, manka, iyo boodhka. Aqoonsiyada oo dhameystiran, alaabada waa la damaanad qaaday, marada meltblown miiraha leh ee seddex lakab + heerka ilaalinta dharka aan tolneyn ayaa sarreeya, shaqada iyo iskuulku waa baxaan, had iyo jeer waardiye, qaab gaar ah xagaaga, iftiin iyo neefsasho, Wajihi wajiga, ma furmayo, iska caabin hoose , ma haayo neefta, dhegaha dhegaha ee laastikada ah ee fidsan, oo raaxo leh in la xidho oo dhagaha ha adkayn.
Maaskarada 'N95' waa mid ka mid ah sagaal waji-waji oo ilaaliya qayb ka mid ah oo ay caddeysay NIOSH. "N" macnaheedu waa adkaysi la'aan saliida. “95 ″ macnaheedu waxa weeye marka loo soo bandhigo tiro cayiman oo ah qaybo gaar ah oo tijaabo ah, isku-soo-ururinta walxaha ku dhex jira maaskarada ayaa in ka badan 95% ka hooseysa isku-uruurinta walxaha ka baxsan maaskaro. Qiimaha 95% ma ahan celcelis ahaan, laakiin waa midka ugu yar. N95 ma aha magac badeecad gaar ah. Ilaa iyo inta ay ka soo baxeyso heerka N95 oo ay ka gudbeyso dib u eegista NIOSH, waxaa lagu magacaabi karaa "N95 mask". Heerka ilaalinta ee N95 waxaa loola jeedaa iyadoo lagu jiro xaaladaha baaritaanka ee lagu qeexay heerka NIOSH, waxtarka shaandhaynta maaddada maaskarada ee walxaha aan saliida lahayn (sida boodhka, ceeryaanta aashitada, ceeryaanta rinjiga, noolaha, iwm.) Waxay gaaraysaa 95%.
Maaskarada difaaca caafimaad waxay ku habboon yihiin ka ilaalinta shaqaalaha caafimaadka iyo shaqaalaha la xiriira ka hortagga cudurrada faafa ee hawo-mareenka. Waa nooc isdaba-marinta is-xoqidda oo isku dhafan oo ah qalabka ilaalinta caafimaadka ee leh heer sare oo ilaalin ah, gaar ahaan ku habboon soo-gaadhista hawada inta lagu jiro baaritaanka iyo howlaha daaweynta Ama marka ay xirtaan bukaanada qaba infekshannada neefsashada ee ay ku faafaan dhibcaha ugu dhow, heerkan maaskaro ayaa shaandhayn kara qaybaha hawada ku jira oo xannibi kara wasakhda sida dhibcaha, dhiigga, dareeraha jidhka, iyo dheecaanka. Waxtarka sifeynta ee walxaha aan saliida lahayn waxay gaari karaan 95 Above% waxay gaareysaa heerka N95, taas oo ah qalab ilaalin shaqsi ahaaneed oo badanaa loo isticmaalo cudurada hawada. Waxay ku habboontahay wejiga wejiga wejiga waana shey mar keliya la isticmaalo. Maaskarada ka hortagga caafimaadku waxay ka hortagi karaan inta badan cudur-sidayaasha sida bakteeriyada iyo fayrasyada. WHO waxay ku talineysaa in shaqaalaha caafimaadku ay u isticmaalaan waji-ka-ilaalin waxyaabaha ka hortaga si looga hortago infekshinka fayraska ee isbitaalka.